Hadhaagii Ubo Oo Kaarto Loo Dhigay 'Caano Ka-dhan' - Cakaara News
Hadhaagii Ubo Oo Kaarto Loo Dhigay 'Caano Ka-dhan'
Minneapolis(CN) Isniin.Maarso.23.2015, Sida aad wararkanagii hore kalasocteen CakaaraNews waxaa jahawareer iyo afkoo juuqda gabay ka qabsatay xubnihii hadhaaga Ubo ee halgankoodu ahaa afka iyo qaylada wah-wahda kadib markii ay kukala jabeen kuna jahawareereen meel ay ka galaan bal inyar oo qaylo ah oo ay waayeen.
Iyadoo Ubo ay kumar marsoonaysay dhaxan baa jirta iyo hebel baa xanuunsan oo xitaa xubno kamida ay taageereen isbadalkan aan laqarin karin ee dhabta ah oo kukala jabay, ayaa waxay hogaamin isku sheegta riyoonaysa nafta kusasabayeen sheekooyin laxidhiidha cimilada iyo caruurtiibaa fasax kumaqan iyo imisa ayaanu been sheegi.
Xubno yar oo ilaa siddeed lagu qiyaasay ayaa iskudayay wah-wah yar balse waxaa meel fog geeyay booliska iyo haayadaha amniga iyagoo kula taliyay inaysan macquul ahayn tiradan yar iyo boqolaalka qubajoogta ah. Sidoo kale waxaa lagu eedeeyay in ay xubno iyaga kamid ah kujiraan al daacish.
Xogo hoose ayaa sheegaya in Maxamed Nuur loo haysto kaartadan jabka ah, iyadoo ay jiraan xubno kadaalay beenta kooxda oo laba shaqeeyay boqolaalkan qurbajoogta ah ee DDSI iyo horumarka garab taagan.
Dib ayaan idiin kasoo sheegi doonaa faah faahinta xogahan iyadoo daqiiqado yar kadib lafilayo inuu shirku bilaabmo.